भिटामिन ओर्थोनल नाटल नाटल नाटेल स्वस्थ गर्भावस्था किन्नुहोस्
एलीनरहरू लचिलोर, जुन प्राय: फ्लेक्समहरू भनिन्छ, बजारमा धेरै पहिले देखा पर्दैन, तर पहिल्यै पहिचान गरिसकेका छन्।
Kapa सफलतापूर्वक गाह्रो काट्ने त्रुटिहरू र, प्रमोट गरिएको ब्रान्डहरू जस्तो, मूल्यमा उपलब्ध छन्।
p> 201 Bo4 देखि उत्पादन रूसमा उत्पादन रूसमा छ, त्यसैले एलियन टेक्नोलोजीमा इटानियन टेक्नोलोजीमा।
कसरी फ्लेक्लीलीनर एलिनरहरू काम गर्दछ?
Kapa प्रत्येक बिरामीको लागि व्यक्तिगत रूपमा निर्मित र माथिल्लो र तल्लो दन्त पंक्तिमा लगिन्छ। तिनीहरू बिल्कुल पारदर्शी छन्, त्यसैले उपस्थिति को बारे मा चिन्ता गर्न आवश्यक छैन: यो अरूको नजिकको फ्लेलिलाइनरलाई ध्यान दिन गाह्रो हुन्छ। उपचार सुरु हुनु अघि अर्थोडन्टिस्टले बिरामीको सञ्चालन सञ्चालन गर्छ, दाँतको सहि पातलोपन हटाउँछ, आवश्यक चित्र बनाउँदछ, उत्पादनमा डाटा पठाउँदछ। क्यापको पहिलो सेट डाक्टरले सेट गरेको छ, तब बिरामीले उनीहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा 2--4 हप्ताहरूमा परिवर्तन गर्दछ।
एलिटायर फ्लेक्सेक्शनललाई हरेक दिन लगाउनै पर्छ, कम्तिमा 22 घण्टा र दाँत खाने वा सफा गरेर मात्र शूट गर्नुहोस्। जब फ्लेक्लिलिनले उसलाई दाँतको स्थिति परिवर्तन गर्ने स्टेज पूरा गर्दछ, निम्न द्वारा प्रतिस्थापन गरिएको छ - र एक आदर्श मुस्कान को अधिग्रहण अघि। उपचार समय र सेटहरूको संख्या काट्ने दोषको जटिलतामा निर्भर गर्दछ।
एलिनेर फ्लिक्स्रेक्रिप्टको धेरै फाइदाहरू छन्, धन्यबादहरू छन् कि बिरामीहरूलाई उनीहरूको अर्थोडन्टन्टिक समस्याहरू सुल्झाउन यो विशेष प्रणालीको रूपमा छनौट गर्दैछ।
एलिनार्टरहरू अनावश्यक क्लिनिक
राम्री दिउँसो) मसँग समस्या छ, किनकि त्यहाँ एक समस्या छ, किनकि त्यहाँको अँध्यारो ठाउँहरू मास्क गर्न गाह्रो छ (मैले तपाईंलाई पढ्छु। लेजर मेटाउन सक्छ, तर मलाई थाहा छैन, तपाईं मलाई भन्न सक्नुहुन्छ, वा सामान्यतया यसले दागलाई लेयरको साथ हटाउन सक्दैन, तर कुनै प्रकारले तपाईलाई धन्यवाद दिनुहोस्!
नमस्कार! मैले बच्चालाई जन्म दिएँ र एक निदान स्क्याल्पको स्कोलप पत्ता लागेको थियो र यो एक आनुवंशिक रोग हो। के सम्भवतः एपिसोसियालाई केहि पत्ता लगाउन सम्भव छ, CS मा डाक्टरहरूको लापरवाही होईन?
shyra वर्षा, एड्रेना, नतियाली र टेरेन माउरी को जोडी मा मार्च 2002 मा मार्च 2002 मा देखा पर्यो।
केटीहरू आनुवंशिक रूपमा समान भयो, सबै भ्रुणहरू एक अण्डाको कोषबाट गठन गरियो, जुन एक सर्पेटोटोजबाट उर्वर थियो।
पाठ्यक्रम, यति विरलै नभई विरलै - संयुक्त राज्य अमेरिकामा मात्र त्यहाँ लगभग 50000 वर्षीय हुन्छन्, तर धेरै बच्चाहरू एकै साथ हुन्छन्।
सबैभन्दा लामो शीत भ्रुण
मे 200 2003 मा जुन्इन यरूशलेममा देखा पर्यो, जसको भार 12 बर्ष अघि जमघट भयो, र यो इतिहासको सबैभन्दा लामो रोइन्टियो। केटा र केटी जन्मानीको तौल 2.3 किलोग्राम तौल भयो।
को इतिहासमा सबैभन्दा लामो र द्रुत जन्महरू:
पोलिश वर्कीको निवासी जोआनना कॉर्ना क्रोशेन्नेले एक ट्रिपलको अपेक्षा गर्दछ। जन्म पछि, गर्भावस्थाको 22 औं चलिरहेको थियो। पहिलो बच्चा प्रकाशमा देखा पर्यो कि बाँच्नको लागि धेरै कमजोर देखिएको छ।
ताकि दुई जना बच्चाहरू आफ्नो जन्म ढिला गर्ने निर्णय गरेनन्, डाक्टरहरूले आफ्नो जन्म ढिला गर्ने निर्णय गरे - जब खुट्टाहरू बढी कोणमा राखिन्छन् ताकि खुट्टाहरू उच्च थिए। टाउको स्तर भन्दा, गर्भाशयमा राख्दै गर्दा।
तर बेलायती फलाक वेलेकले बच्चा जन्माएको सब भन्दा छिटो मद्दत गरे। उनलाई2मिनेट मात्र चाहियो। पानी बिते र एक महिलाबाट पानी जति पटक एक महिलाबाट शाब्दिक रूपमा एक स्वस्थ केटी उफ्रयो जुन भेडीडा भनिन्थ्यो। के भने, पालाक द्रुत गतिमा चाँडै जन्म पाउने अभ्यस्त छैन: उनको पहिलो-उल्लेखित छोरो केवल एक घण्टामा जन्म भएको थियो।
छ जुडाको जन्म एक अत्यन्तै दुर्लभ घटना हो जुन 4. लाख मानिसहरुको अवस्थामा फेला पर्दछ। यो भन्दा पहिले मात्र, छ जना बच्चाहरू न्यूयोर्कमा जन्मेका थिए। यो 1 1997 1997 in मा भयो।
अक्टोबर 2010 मा नेपल्सबाट टाढा, नेपल्सबाट टाढा जैतुनहरूको लागि जैतुन भएको छ - चार केटीहरू र दुई केटाहरू। इटालीमा, विगत 1 years बर्षमा पहिलो समान अवस्था थियो।
बच्चाहरूलाई जन्म दिन डाक्टरहरू सिजेरेज क्रस सेक्सन रिसोर्ट गर्न बाध्य भए। बच्चाहरू थोरै तौलका साथ जन्मेका थिए - 60000 देखि 80000 ग्रामबाट। डाक्टरका अनुसार त्यस्तै घटना कृत्रिम निषेचनको साथ जडित छैन, तर श्रीमती पारित भएको उपचारको साथ - तथ्य यो हो कि इटालियन कानूनले तीन भन्दा बढी भ्रूणलाई निषेध गरेको छ।
बोबी म्याकागी (संयुक्त राज्य अमेरिका) नोभेम्बर 1 , 1 1997 1997, मा7बच्चाहरू जन्म दिए। तिनीहरू 104848 देखि 1 14744434 ग्राम देखि तौली र 1 weeks0 हप्ताको गर्भावस्था को3मिनेटको गर्भावस्था को cesarare भागहरु को लागी 300 हप्तामा जन्मेका थिए।
tween जुम्ल्याहा4हप्ताको लागि उमेरको लागि जन्म भयो - 1
August अगस्त 200 2008 मा उत्तरी मिश्री प्रान्त बेसिरको227 वर्षीया पत्नीले गाजा हाइसले तुरुन्तै दुई जना जुम्ल्याहालाई जन्म दिए! जब मिश्रीले आफ्नो छोरालाई आफ्नो लोग्ने दिन सपना देखे र तयारी उत्साहलाई गर्भावस्था राख्यो। नतिजा चार छोरा र तीन छोरीहरू हुन्।
नवजात आठ जनाको आमा लस एन्जलसको उपनगरमा आफ्ना अन्य बच्चाहरू र अभिभावकहरूसँग सँगै बाँचेका थिए - वर्ल्डरको सानो शहरमा। परिवारले दुईदेखि सात वर्षका छ जना बच्चाहरूको उमेर बढेको छ, जुन त्यहाँ दुईवटा जुम्ल्याहा छन्।
चीनको निवासीले विश्व रेकर्डमा हराइसकेको छ, बच्चालाई लगभग दुई वर्ष गर्भावस्था हेडिंगमा हरायो। किन यो भयो र कसरी यो कथा समाप्त भयो - विषयवस्तुमा पढ्नुहोस्।
यो सबै प्राय: सुरू हुन्छ। हुनको प्रदेशबाट चीन अफआरका निवासीहरू हूनको प्रदेशबाट उनी गर्भवती छिन्। बच्चालाई धेरै स्वागतयोग्य थियो, त्यसैले त्यस महिलाले पूर्ण स्वि ing मा मातृत्वको तयारी गर्दै थिइन्।
<< p> सबै कुरा राम्ररी र जटिलताहरू बिना, तर चिकित्सकहरु मध्ये एक सर्वेक्षणमा उनीसँग प्लेसेन्टको विकाससँग समस्या भएको थियो। शेया आफ्नो बच्चाको लागि डराउँछिन्, किनकि, भ्रुणको उपकरणको क्रममा चिनिन्छ, यो प्लेसेन्सा हो जसले पोषण हो जसले मलाई मार्शल र अक्सिजन प्रदान गर्दछ।
महिला हताश थियो, तर डाक्टरहरूले भने कि अहिलेसम्म केहि लिन आवश्यक छैन। एक मात्र प्रतीक्षा गर्नुपर्छ र नियमित रूपमा डाक्टर जाँच गर्नुपर्छ। त्यसैले months महिना बित्दै गए, र शियोले पहिले नै अत्यन्तै प्रसवको आशा गरिसकेको छ, तर लडाई आयोैन।
डाक्टरहरूलाई केवल उनीहरूको हातले पातलो पार्नुभयो - बच्चा किन समयमै प्रकाशमा देखा पर्ने कुनै हतारमा देखा पर्न नसक्दछ भनेर तिनीहरूलाई थाहा भएन। चिनियाँ महिलाले उनलाई सिजेरियन क्रस सेक्सन बनाउन भनिन, तर डाक्टरहरूले यो पनि खतरनाक छ भनेर सोधे - प्लेसेन्टा गलत रूपमा अवस्थित थियो, धेरै गरीब अवस्थामा। अपरेसनले मृत्यु र आमालाई निम्त्याउन सक्छ र बच्चालाई।
यसको गर्भावस्थाको सम्पूर्ण अवधिको लागि, यसले करीव dis0 विभिन्न निरीक्षण र विशेष प्रक्रियाहरू पारित गर्यो। यी सबै धेरै पैसा खर्च भयो, तर जे भए पनि जन्म ल्याउन असफल भयो। महिला गर्भवती महिलाको 1 months महिना सताइन्छ - लगभग दुई गर्भावना जस्तो।
<< p> August अगस्त 1 , 201 2016 मा, किताकाको लामो-प्रतीक्षा गर्न थाल्यो। चाँडै उनले पूर्ण स्वस्थ बच्चालाई 3..8 केजी तौलको लागि जन्म दिइन्। त्यो भन्दा पहिले एक अमेरिकीको साथमा सबैभन्दा लामो गर्भावस्था मानिन्थ्यो, जसले 12..5 महिनालाई आपत्ति लगायो।
महिला लेखक: रिभर्टर, डटर, गर्नुहोस् - महिला फ्लोरिडा हृदय रोग - महिलाको मृत्युको मुख्य कारण, तर यो उनीहरूको स्वास्थ्यको लागि सबैभन्दा ठूलो जोखिम हो । यदि हृदय रोग छैन भने के हुन्छ? डाटाले देखाउँदछ कि ...